Mawanirwe Echitendero Chechokwadi
Kana uchida kuva shamwari yaMwari, unofanira kuita zvinodiwa nechitendero chinobvumirwa naMwari. Jesu akataura kuti “vanamati vechokwadi” vaizonamata Mwari maererano ne“chokwadi.” (Johani 4:23, 24) Panongova nenzira imwe yakarurama yokunamata nayo Mwari. (VaEfeso 4:4-6) Chitendero chechokwadi chinotungamirira kuupenyu husingaperi, uye chitendero chenhema chinotungamirira kukuparadzwa.—Mateu 7:13, 14.
Unogona kuziva chitendero chechokwadi nokucherechedza vanhu vanoita zvachinoda. Sezvo Jehovha akanaka, avo vari vanamati vake vechokwadi vanofanira kuva vanhu vakanaka. Kungofanana nomuranjisi wakanaka unobereka maranjisi akanaka, chitendero chechokwadi chinobereka vanhu vakanaka.—Mateu 7:15-20.
Shamwari dzaJehovha dzinoremekedza Bhaibheri zvikuru. Dzinoziva kuti Bhaibheri rakabva kuna Mwari. Dzinobvumira zvarinotaura kuti zvitungamirire upenyu hwadzo, kuti zvipedze zvinetso zvadzo, uye kuti zvidzibatsire kuti dzidzidze nezvaMwari. (2 Timoti 3:16) Dzinoedza kuita zvadzinoparidza.
Shamwari dzaJehovha dzinodanana. Jesu akaratidza kuda vanhu nokuvadzidzisa nezvaMwari, nokurapa vairwara. Avo vanoita zvinodiwa nechitendero chechokwadi vanoratidzawo rudo kune vamwe. Kufanana naJesu, havatarisiri pasi varombo kana verimwe dzinza. Jesu akati vanhu vaizoziva vadzidzi vake nokudanana kwavo.—Johani 13:35.
Shamwari dzaMwari dzinoremekedza zita raMwari, Jehovha. Kana mumwe munhu akaramba kushandisa zita rako, munhu iyeye angava shamwari yako yapedyo here? Aiwa! Kana tine shamwari, tinoshandisa zita rayo uye tinotaura zvakanaka nezveshamwari iyoyo kune vamwe. Saka avo vanoda kuva shamwari dzaMwari vanofanira kushandisa zita rake nokutaura nezvake kune vamwe. Jehovha anoda kuti tidaro.—Mateu 6:9; VaRoma 10:13, 14.
Kufanana naJesu, shamwari dzaMwari dzinodzidzisa vanhu nezveUmambo hwaMwari. Umambo hwaMwari ihurumende yokudenga ichaita kuti pasi rive paradhiso. Shamwari dzaMwari dzinoudza vamwe mashoko aya akanaka oUmambo hwaMwari.—Mateu 24:14.
Zvapupu zvaJehovha zvinoedza kuva shamwari dzaMwari. Zvinoremekedza Bhaibheri uye zvinodanana. Zvinoshandisawo nokuremekedza zita raMwari uye zvinodzidzisa vamwe nezvoUmambo hwaMwari. Zvapupu zvaJehovha zvinoita zvinodiwa nechitendero chechokwadi pasi pano nhasi.